:: My Little World ::: ၀က်ခြေထောက်စွပ်ပြုတ်၊ ၀က်သားကောက်ညှင်းထုပ်၊ ၀က်သားဒုတ်ထိုး
Posted by Nay Nay Naing at 5/31/2009 12:28:00 AM
စားချင်စရာတွေချည်းပါပဲလားဗျာ... သရေ လာကျသွားတယ်.. အဟဲ
Sunday, May 31, 2009 2:48:00 AM
Sunday, May 31, 2009 10:55:00 AM
ရန်ကုန်ပြန်တာသေချာသွားပြီပေါ့........၀က်ခြေထောက်စွပ်ကို ကြည့်ပြီး ငိုချင် အဲ စားချင်လိုက်တာ...မတော်ရသေးတဲ့ အမျိုးတွေက သဘောကောင်းလိုက်ကြတာနော်..နေနေ ကံကောင်းတယ်...နာလိုဘူး။
ဝက်ခြေထောက်တွေ ကြည့်ရတာ အားကျစရာ၊ ကိုလက်စထရောတွေ မြင့်တက်လာမှာစိုးလို့၊ ငေးကြည့်ရုံ ကြည့်သွားတယ်။
Sunday, May 31, 2009 4:11:00 PM
ကောင်းတယ် နေနေ အဲ့လို များများစားပေး ဒါမှ ၀တုတ်လာမှာ
Sunday, May 31, 2009 9:58:00 PM
စားချင်လိုက်တာ..အားရပါးရ ခံစားသွားတယ်...အသားလိပ်ပုံကိုလည်း မှန်းဆသွားတယ်...စားချင်လို့ ...၀က်သားမပြောနဲ့ ..၀က်တစ်ကောင်လုံးကို မျိုချချင်နေတာ.....
Monday, June 01, 2009 4:06:00 AM
Pig's Foot Soup ရဲ့အငွေ့အသက်ကိုလာရောက်ခံစားသွားတယ်။ (မိုးနတ်မင်းကြီးပေါ့။)
အောက်ဆုံးက ပန်းကန်လာပေးရင် ၃ မိနစ်ပဲ။
Monday, October 05, 2009 10:32:00 PM
ksanchaung က pig's foot soup ဆိုပါ့လား? ကျနော်ကတော့ ဝက်ခွာစွပ်ပြုတ်လို့ နားလည်လိုက်ပါတယ်။ သယ်ရင်း စိတ်မဆိုးကြေးနော်။ ခင်လို့စတာပါ။ ဝက်ခြေထောက်စွပ်ပြုတ်ကို လိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်မှန်း အိုင်လည်း မသိဘူးစ်။ ဒါပေမဲ့ ခြေထောက်ကို လက် "leg" ခြေဖဝါးကို ဖွတ် "foot" လို့တော့ ပြောသံကြားသလားလို့။ ဝက်မှာက ခြေဖွားအစား ခွာပဲ ရှိတာမလား? အဲ့ဒါအဲ့ဒါ။ အဲ ငမ်းသွားတယ် ဝက်ခြေထောက်ကိုကော၊ ဝက်ကောက်ညှင်းကိုကော၊ တုတ်ထိုးဝက်ကိုကော။ o_O
Monday, October 05, 2009 10:39:00 PM